Brezila: Herisetra mianjady isan’andro amin’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2010 7:29 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Italiano, македонски, Français, Nederlands, Español, বাংলা, Swahili, 繁體中文, 简体中文, English
Ilay famonoana vehivavy tsy ela akory izay, nataon'ilay eritreretina ho rain-janany, sady mpiandry tsatokazo Breziliana tokony hanana ny hoaviny, dia nibaribary tanatin'ireo media, sy nahatohina mafy tokoa ny firenena manontolo noho ny haavon'ny herisetra nentina nanaovana ilay heloka bevava. Mandritra izany fotoana izany, ny Instituto Zangari [pt], ivontoerana ara-tsiansa iray ao São Paulo, dia namoaka Sarintanin'ny Herisetra ao Brezila [pt] ho an'ny taona 2010 ilazany fa vehivavy 10 isan'andro no maty misy mamono ao amin'io firenena io. Tsy azo nialàna, ny tontolon'ny fitoraham-bolongana dia mampifandray ireo zavatra roa ireo ary ny fanamelohana ny heloka bevava toy izao dia nanjary lohahevitra mangotraka any ambadik'ireo fampielezampeo sy fampahalalam-baovao mahazatra, izay nijanona fotsiny hatreo amin'ny heloka bevava nataon'ilay mpilalao baolina kitra.
Raha ny filàzan'i Nilcéa Freire, minisitra misahana ny politika momba ny vehivavy, ‘raha ny marina dia tena goavana be ny tsy firaharahan'ny media ny herisetra atao amin'ny vehivavy’ [pt]:
Rehefa misy ireo tranga, indrindra indrindra fa mahakasika olona malaza mahatonga azy ho tena vaovao lehibe, ny fiarahamonina dia mahita/mahatsapa izay mitranga amin'ny fiainana andavanandro tsy mba alaina anaty gazety. Ny vehivavy dia voadaroka, andevozina isan'andro noho ny tsy fitoviana.
Tonga saina amin'io, ireo vondrom-behivavy, toy ny Pão e Rosas [Mofo sy Raozy, pt], dia manontany hoe impiry ny toy ireny no tokony hitranga ka miantso ireo vehivavy rehetra voaporiporitra mba hivondrona any an-tsekoly, eny amin'ny firaisana vodirindrina ary any amin'ny toeram-piasana.
Mila isika mangataka toeram-pialofana ho an'ireo vehivavy iharan'ny herisetra , ho an'ny zanak'izy ireo lahy na vavy, vatsian'ny fanjakana ara-bola saingy kosa eo ambany fitantanan'ireo niharam-boina ihany, ny fikambanana sy ny komisiaonan'ireo vehivavy tsy miankina amin'ny fanjakana, avy amina sendika, avy amin'ny mpitandro filaminana ary ny fiangonana.
Andro iraisampirenena anoherana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy, Flickr, Tahirin-tsarin'i Daniela Gama, nampiasàna ny CC
Samy manana ny fisehony ireo trangana herisetra atao amin'ny vehivavy any Brezila. Raha etsy andaniny, mihoatra ny famonoana 10 isaky ny mponina 100.000 any amina distrika 50, dia maherin'ny antsasa-manila amin'ireo tanàna Breziliana no tsy naharaketana vonoolona. Rehefa mampitaha ireo fanjakana Breziliana maro, dia mahazendana ireo elanelana:
Espírito Santo, voalohany ao anatin'ny filaharana, dia manana haavo famonoana vehivavy 10,3 isaky ny mponina 100.000. Any Maranhão dia 1,9 amin'ny 100.000. Ny vokatra dia maneho ny tsy fitovian'ny fivangongoan'ny famonoana ao Brezila. Sarotra be ny hitady lasitra afaha hanome fanazavana ireo tranga ireo” hoy i Julio Jacobo Wiaselfisz, mpikaroka nanoratra ilay voka-pikarohana.
Tanatin'ny 10 taona farany, vehivavy maherin'ny 41.000 avy amin'ny sarangam-piarahamonina maro samihafa eo anelanelan'ny 18 sy 30 taona no nisy namono, mazàna eo imason'ny zanany izay matetika ihany koa no iharan'ny herisetra [pt]. Ny tsy fahampian'ny sampan-draharaha mpandray an-tànana ireo vehivavy manana olana no voatondro ho iray amin'ireo antony mahatonga ho tsimatimanota ireo mpanao herisetra na eo aza ny lalàna Maria_da_Penha nivoaka ny 2006, izay manome fiarovana ireo vehivavy aorian'ny fitarainana iray sy manome antoka azy ireo fa ho voasazy tokoa ireo mpanao herisetra. Na zany aza [pt],
ilay lalàna vaovao dia tsy nahasakana mihitsy ny famonoana ilay mpanao taovolo Maria Islaine de Morais, maty novonoin'ny vadiny taloha teo anatrehan'ny cameras tamin'ny Janoary, olona izay efa nametrahany fitarainana miisa 8.
Herisetra mihatra amin'ny vehivavy, azontsika atsahatra!, nampiasàna ny CC
Ny marina, ny ankabeazan'ireo tra-doza dia novonoin'ny olona akaiky azy ireo ihany, vady, sakaiza na lehilahy hafa izay mety ho nolavin-dry zareo [pt].
Ny fandàvana tsy hiray ara-nofo na faniriana hanapaka fiarahana no tena mahatonga ireny tranga ireny. Ny 50% amin'izy ireny dia antony nofaritana ho tsy dia misy dikany akory, toy ireo tranga noho ny raharahan-tokantrano. 10% no heloka bevava tafiditra amin'ny hoe ‘noho ny fitiavana’, mifandray amin'ny hasarotam-piaro, ohatra, ary 10% no vokatry ny fampiasàna na fivarotana zava-mahadomelina.
Ny fototry ny herisetra dia lazaina [pt] ho miainga avy amin'ny tsy fanomezan-danja zavatra iray izay isan'ny mamaritra ny kolotsaina Breziliana:
Ireny andiana herisetra atao amin'ny vehivavy ireny dia mampibaribary ny halozàna mihatra amin'ny vehivavy Breziliana. Mivoaka masoandro ny toetsaina tsy miraharaha zavatra iray ao anatin'ny kolotsaina Breziliana; nitsinkafona ilay ranomandry endrika miafin'ny tena zava-misy nafenintsika tany ambany tsihy. Tena avo tokoa ny isan'ny herisetra ka mahatonga antsika hihorohoro sy hanontany raha tena olombelona tokoa no nanao azy ireny!
Ho an'ilay mpitoraka blaogy Flávia D. [pt] dia ny vehivavy mihitsy koa no isan'ny olana. Matetika izy ireo no manaiky sy mametraka ny anjara toeran'ny vehivavy ao anaty fiarahamonina ho andevon'ny lehilahy, ary matetika voalohany amin'ny fiampangana ireo vehivavy mitondra tena tsy araka izay heverin-dry zareo ho mifanaraka amin'ny tokony ho izy aminy, manamaivana ny zavatra ataon'ireo mpidaroka na dia tsy mivantana aza. Ho an'ny Barbarelas [pt], blaogy iray manokan-tena hiady amin'izay rehetra mety ho herisetra, ilaina ny mampivondrona ny fiarahamonina mba hampitsaharana izay endrika herisetra rehetra atao amin'ny vehivavy.
Tsy azo leferina ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy, tsy azo ekena, mandratra ny fahaiza-mandinika maha-olombelona, fanaovana tsinontsinona ny zon'olombelona izany. Miantraika amin'ny fahasalamana, mampihena ny fahelàna velona sy ny fari-piainan'ny vehivavy. I Brezila, amin'ny maha isan'ny nanao sonia ny fifanarahana iraisampirenena momba ny zon'ny vehivavy azy, sady manana lalànam-pirenena tokony hampiharina, dia tsy afaka ny hipetraka sy hialangalana fotsiny. Manantena izahay fa handray andraikitra ny manampahefana tsirairay. Ary io fiarahamonina io, ny hetsik'ireo lehilahy sy vehivavy ho fitovian-tsaranga, manohitra ity fikororosin'ny kolotsaina, tsy firaharahana sy ny fialangalanana ity.
Ireo vehivavy mila fanampiana ao Brezila dia afaka miantso maimaimpoana ny 180 hiampangana ny herisetra atao azy ireo na izay an-tandrevaka ataon'ny manampahefana momba ny fitarainana sy ny tranga momba azy ireo. Ny vaovao dia nalaina avy amin'ny blaogy Contra Machismo izay mampahatsiahy ny mpamaky amin'ny lohatenin'ny lahatsorany fa ao Brezila dia mbola miseho lany isan'andro ny herisetra atao amin'ny vehivavy.
Vakio ny lahatsoratra mifandraika Brazil: The Violence Against Women Debate nosoratan'i Diego Casaes anatina andiany amin'ireo Lahatsoratra manokan'ny Global Voices anangonana fijoroana vavolombelona sy feo manodidina ny Andro Manerantany ho Famongorana ny Herisetra atao amin'ny Vehivavy – The International Day for the Elimination of Violence Against Women (Novambra 2009).